January 2012 | မိုးဇက်
Posted on Saturday, 28 January 2012
ငါ့အာရုံတွေကို ခုချိန်ထိမှောက်မှားဆဲပဲ ။ ။
ပုံမှန်တတ်နေတဲ့ ဒီရေ ။ ။
ငါ့ရှေ့က ဖြတ်ကနဲ ထွက်ခွာသွားတဲ့မင်းကို
နာကျဉ်းရမှာလား ၊ ခွင့်လွတ်ရမှာလား ?
ငါ့ညတွေ မိုးမလင်းနိုင်သေးဘူး ။ ။
နေသလား ချစ်သူ ..........
တယုတယ ဖူးပွင့်ခဲ့တဲ့ ငါ့အချစ်ကို
ဖြစ်သွားတာ မှတ်မိသေးတယ်ချစ်သူ ။ ။
မင်းထွက်ခွာသွား ရက်တယ် ချစ်သူ ။ ။
အဲဒီနေ့က ဟောဒီလမ်း (၃၀) ပေါ်မှာ
မိုး / မျက်ရည်တွေ သည်းသည်းကျနေတာ
မိုးသည်းတယ် ချစ်သူ ။ ။
မျက်နှာသစ်ချင်တယ် ။ ။
တစ်စစ နစ်ဝင်သွားအောင်ကို ချစ်ခဲ့တယ် ။ ။
ငါ့ချစ်ခြင်းတွေနှင့် ဟစ်ကြွေးခဲ့တယ် ။ ။
ပြီးပြည့်စုံအောင်ကို ဖြည့်တွေးချစ်ခဲ့တယ် ။ ။
တစ်ရာသီလုံးစာ ချစ်ခဲ့တယ် ။ ။
အချိုးကျကျ ထုဆစ်ခဲ့တယ်။ ။
လွတ်ကျသွားအောင်ကို ချစ်ခဲ့တယ် ။ ။
ငါ့ဘာသာ ထမ်းပိုးသွားမယ် ။ ။
ဟုတ်တယ်မင်းဟာ ကဝေမလေးတစ်ကောင်ပဲ ။
ထိတ်လန့်တကြား ထခုန်အောင် ပြုစားလား ပြုစားရဲ့ ။ ။
ဟုတ်တယ် မင်းဟာ ကဝေမလေးတစ်ကောင်ပဲ ။
ပြည့်နေအောင် ပြုစားလား ပြုစားရဲ့ ။ ။
မင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အရာအားလုံးကိုလဲ ငါချစ်တယ် ။
အသဲတွေကြွေမွှ ပျက်ဆီးသွားအောင် ကို ငါချစ်တယ် ။
ချည်နောင်ပီးတော့ကို ငါချစ်တယ် ။ ။
ငါချစ်နေရတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
ထက်မပိုခဲ့ဘူးလား ကောင်မလေးရယ် ...........
ငါ့အသဲတွေ ခံနိုင်ရည်မရှိဘူး ။ ။
ဗြုံးစားကြီး မကွဲချင်ဘူး ၊
ပစ္စလက်ခတ် ပျက်ရယ်ပြုရက်တယ် ကောင်မလေးရေ ။ ။
ဟုတ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့သံသယ နှင့်
သုံးညမိုးလင်းခဲ့တယ် ။ ။
Posted in anniversary | 1 Reply
ငါမင်းကို ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်နေနေ ငါချစ်နေတယ် ။
မင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေငါ ချစ်နေတယ် ။
မင်းမှာဘာပဲဖြစ်နေနေ ငါ ချစ်နေတယ် ။
ဟော ............. စကားတွေက ရှုပ်ထွေးသွားပြန်ပီ ။
အထက်အောက် . ဘယ်ညာ . တောင်မြောက်
ညိမ့်ညိမ့်လေး ၊ တသွင်သွင် ၊ ညင်သာပျော့ပျောင်းစွာ
ငါ မင်းကို ချစ်နေတယ် ။
ငါ့ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာ မင်းဘဝအတွက် နန်းတည်
ဟော .......................စကားတွေက ရှုပ်ထွေးသွားပြန်ပီ ။
ဘဝရဲ့ စာမျက်နှာမှာ မင်းဘယ်နှခါ
မင်းကို ငါချစ်နေတယ် ။
မင်းကို ငါချစ်နေတယ် ။ ။
တလက်လက် တောက်ပခဲ့တယ် ။
ဖူးပွင့် ဝေဆာ သွားခဲ့တယ်..........။ ။
မင်းဟာငါ့အတွတ် ဝ2 ဖြစ်သလို
ငါဟာမင်းအတွက် ဖိနပ်တစ်ရံဖြစ်ပါရစေ ။ ။
အစဉ် လမ်းဆမ်းထာဝရ မညိုးနွမ်းတဲ့
ခိုင်ကျဉ်တဲ့လက်တစုံနှင့် ပန်ဆင်ပေးပါရစေ ။ ။
ငါ့အသည်းခံတပ် ကျဆုံးခဲ့တယ် ။ ။
ဘယ်အရာကိုမှ ခံတွင်းမတွေ့တော့ဘူး ။ ။
တွဲလက်တွေ မဖြုတ်စတမ်း ငါ့တို့ဘ၀ရဲ့
ရုပ်လုံးတွေ လှပစွာပုံဖော်ရအောင်ပါ ။ ။
ငါဟာ မိုက်မဲစွာသီဆိုခဲ့တာပါ ။ ။
သီချင်းတွေ အဆုံးအသတ်သေးဘူး ။ ။
မသပ်မရပ် လှည့်စားချက်တွေအောက်က ငါ
ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့တယ် ။ ။
မင်းနှုတ်ဖျားမှာ ငါကျွတ်တမ်းဝင် သင့်ပါပြီ ။ ။